Kedu ihe bụ Amazon Premium? na ihe uru ọ nwere maka anyị | ECommerce ozi ọma
Amazon Prime, nke a maara n'asụsụ Spanish Adịchaghị Ahịa, bụ ọrụ nwere ihe karịrị otu narị nde mmadụ zuru ụwa ọnụ ma na-enye ohere maka egwu, vidiyo, mbupu n'efu, yana ego ezumike ụbọchị yana ọtụtụ ọrụ na onyinye ndị ọzọ dị na Amazon. Ugbu a Ọnụ ego ndị otu ọnwa bụ € 4.99, ebe ndị otu afọ na-efu .36.00 XNUMX.
Para muchos, ọrụ a bụ enweghị echiche ọ bụla naanị maka uru eji ebugharị, Mana enwere ọtụtụ ndị otu ọnụọgụ ọnụọgụ Amazon karịa iyi egwu na ọrụ anaghị akwụ ụgwọ. Ọzọ anyị ga-ekwu maka ihe niile metụtara Amazon Prime na uru ị nwere ike ịnweta ozugbo ị ghọrọ onye otu.
1 Kedu ihe ọ pụtara ịbụ onye otu Amazon Premium?
2 Uru na uru nke Amazon Premium
2.2 Prime Ọgụgụ
2.3 Abụ egwu
2.4 Foto ndị Amazon
2.6 Ezinụlọ Amazon
2.7 Ibu ụzọ nweta
Kedu ihe ọ pụtara ịbụ onye otu Amazon Premium?
Beingbụ onye otu Amazon Premium pụtara na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnweta ụfọdụ uru ndị na-azụ ahịa oge niile enweghị. Nke ahụ bụ, Amazon Prime ndị otu tozuru oke n'efu otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ na ọtụtụ ihe, n'etiti uru ndị ọzọ agbakwunyere.
Uru na uru nke Amazon Premium
Maka ndị ahụ na - emegharịghachi azụ na ntanetị nke Amazon, ọrụ a na - enye ha ohere ị ga - erite uru site na uru nke ọrụ Premium. Ya mere, enwere ezigbo ego nke ihe mere ị ga-eji denye aha na Amazon Premium, na anyị chọrọ ịgwa gị banyere nke ahụ kpọmkwem n'okpuru.
Mbupu ngwa ngwa, n'efu na akparaghị ókè na enweghị ụgwọ ọzọ
O doro anya na nke a bụ otu n'ime ihe kacha mma mere ị ga-eji denye aha na Amazon Prime. Na Amazon Premium, ndị otu niile nwere ike irite uru na a Ẹnam ekese ke 1 ụbọchị na nde abụọ na ngwaahịa, Ẹnam ekese ke 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị free na ọtụtụ nde ngwaahịa na-enweghị kacha nta zuo, maka ngwaahịa abụọ nke Amazon na-ere ma mezue ya. Ọrụ a dịkwa maka isi ihe nchịkọta na Satọde gụnyere maka nhọrọ nke koodu zip.
N'aka nke ọzọ, nnyefe n'efu taa, dị ihe karịrị otu nde ngwaahịa ndị Amazon mezuru ma mezuo iwu site na € 29. Ndị otu nwere ike ịzụta iwu ha site na Mọnde ruo Fraịde n'ụtụtụ, wee nata ngwaahịa ha site na 18: 30 ruo elekere 22: 00 elekere, ọrụ a na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ koodu nzi ozi nke Madrid, na ụfọdụ nke Barcelona. A na-enye nhọrọ a n'oge usoro ịzụta, ọ bụrụ na koodu zip gị dị n'ime enye onyinye n'efu taa.
N'ihe banyere ọrụ nnyefe na ngwụsị izu, pụtara na Amazon Premium òtù nwere ike nata iwu gị na Satọde na Sọnde. Ọrụ a dị na mbufe ụbọchị 1 n'efu na mbupu ụbọchị 2 ma ọ bụ 3 na enweghị ọnụ ahịa ọzọ. Ọbụghị naanị nke ahụ, ndị ahịa nwere nhọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ nnyefe na adreesị ha chọrọ yana n'ezie ọ dịkwa maka nhọrọ dịgasị iche nke koodu zip.
Ma nnyefe ọrụ na mkpuchi Amazon, nke a pụtara na Ndị isi Amazon Prime nwere ike iburu iwu ha na Amazon Locker kacha nso na ebe obibi gị. E nyere n'efu 1 ụbọchị mbufe na nnyefe mkpuchi nke Amazon, maka ngwaahịa nde abụọ na ụlọ ahịa Amazon. O zigara ụbọchị 2-3 n'efu na nnyefe mkpuchi nke Amazon maka ọtụtụ nde ngwaahịa ndị ọzọ.
Ọzọkwa dị bụ Ọrụ nnyefe na Nchịkọta Ihe, nke dị na nke a pụtara na ndị ahịa nwere ike ịzụta ngwaahịa gị taa wee nata ha maka echi n'efu, ebe ọ bụla ha họọrọ. A na-enyefe mbupu n'efu na ụbọchị 1 na nnyefe na ebe nchịkọta, otu ụbọchị mbupu na nhọrọ ịhọrọ "Nnyefe Taa", nke ga-akwụ ụgwọ € 6.99 kwa ngwaahịa. E nwere ugbu a karịa ebe 5.700 na-achịkọta isi na mba Spain na agwaetiti Balearic.
Dabere na - nnyefe ọrụ na mwepụta ụbọchị, Nke a bụ ọrụ nke ndị ahịa nwere ike idobe ngwaahịa ha na ire ere ma nata ha ụbọchị ha dị tọhapụrụ na mbupu n'efu. N'okwu a, enwere ya na nbupu ụbọchị 1 n'efu maka ọtụtụ nhọrọ nke akwụkwọ ere ere, DVD na egwuregwu vidiyo.
N'okwu nke Prime Ugbu a, nke a bụ ọrụ pụrụ iche maka ndị isi Amazon na obodo ndị dị na Barcelona, ​​Madrid, Valencia na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Ndị ahịa na-erite uru site na mbufe n'efu na elekere 2 ma ọ bụ elekere 1 maka ọnụego € 6.90 na Madrid na Valencia, ebe na Barcelona ọnụego ya bụ 5.90 8. Ọtụtụ iri puku ngwaahịa dị, yana nnyefe site na 00: 8 ruo etiti abalị, ụbọchị ọ bụla n'izu na Madrid, ebe a na-enyefe na Barcelona site na Monday ruo Saturday site na 00: 10 ruo etiti abalị, Sọnde site na 00: 22am ruo 00:XNUMX pm
Na Valencia, nnyefe sitere na 10: 00 ruo etiti abalị ụbọchị ọ bụla n'izu.
Nke a bụ ọrụ na uru ndị Amazon na-enye ndị otu Prime na nke ya ha nwere ike na-ekiri fim na usoro, yana Usoro ndị mbụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, ha na-erite uru site na mbufe n'efu 1 na-akparaghị ókè ụbọchị na 2 nde ngwaahịa. Enwere Oge ikpe ikpe n'efu 30, mgbe nke a gasịrị ụgwọ ọnwa bụ € 4.99.
Ndị otu Amazon Premium nwekwara ike budata ọdịnaya na Amazon Prime Video iji nwee ike ịnụ ụtọ ya na ntanetị, ekele maka ngwa Prime Video. Nke a pụtara na ha nwere ike ibudata fim na usoro na ngwaọrụ mkpanaka ha dị ka mbadamba gam akporo na Smartphones, iPhone na iPad. Ngwa a gunyere oru a na-akpọ X-Ray, nke ị nwere ike ịchọpụta egwu na ndị na-eme ihe nkiri, nweta akụkọ ndụ ha ma chọpụta ọchịchọ ịmata ihe nkiri.
N'okwu a, ọ bụ ọrụ nke ndị otu Amazon Premium nwere ike ịnweta nnukwu nhọrọ nke akwụkwọ elektrọnik na-emelite kwa oge. Otu uru dị na ọrụ a bụ na ndị ahịa achọghị ngwaọrụ Kindle iji nwee ọ contentụ ọdịnaya niile. Naanị ha ga-ebudata ngwa Kindle n'efu na ngwaọrụ iOS ma ọ bụ gam akporo ha ma gụọ akwụkwọ kachasị amasị ha n'oge ọ bụla.
O doro anya na Prime Music bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu na Amazon, dị ka ọ na-enye ọtụtụ uru maka ndị hụrụ egwu n'anya. Maka ndị na-ebido ebido, ha nwere ike ige egwu niile kachasị amasị ha na ngwa niile ha ji, site na kọmpụta na mbadamba ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka.
Nke ahụ abụghị ihe niile, ha nwere ike nweta ihe karịrị nde 2 na egwu 40 awa kwa ọnwa na-enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ ụdị mgbasa ozi ọ bụla. Ha nwekwara ike ịnụ ụtọ ndetuta ọkpụkpọ na ọdụ redio, yana irite uru na ọnọdụ anọghị n'ịntanetị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ị kwalite na Amazon Music Unlimited, ọnụego onye ahụ bụ € 9.99 kwa ọnwa, ebe ọnụego ezinụlọ bụ is 14.99 kwa ọnwa.
Foto ndị Amazon
Nke a bụ ọrụ na-enye ohere nanị ndị ahịa Amazon Premium, ndabere, hazie, ma kesaa foto na vidiyo kpọmkwem site na ekwentị mkpanaaka gị, kọmputa, na ngwa ndị ọzọ dakọtara. Ihe dị ukwuu bụ na enwere ike ịnweta foto na vidiyo niile na ngwaọrụ ọ bụla ma na-akọrọ ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi mfe.
Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke Foto Amazon bụ na ọ bụrụgodi na onye ọrụ tufuo ekwentị mkpanaaka ha ma ọ bụ mebie ya, ihe oyiyi ha na vidiyo ha echekwara echekwara n'oge niile. Ozugbo echekwara ihe onyonyo ma ọ bụ vidiyo na Foto Amazon, ndị otu nwere ike ihichapụ ha na ngwaọrụ mkpanaka ha iji zere ịgbanye ohere ahụ.
Site na ịnọ n'igwe ojii, ndị ọrụ nwere ike ịnweta ọdịnaya a si ebe obula ha no.
Twitch bụ ihe egwuregwu na-adabere na egwuregwu vidio na ikpo okwu vidiyo, ebe kwa ubochi gbara ihe dika nde iri n’ise n’iile n’uwa, zuko ihe kariri nde ndi oru mgbasaozi ato n’ile anya ma kwue okwu banyere egwuregwu vidio. Ya mere, Ndị otu Amazon Premium nwere ohere ịnweta Twitch Prime, nke ha nwere ike ịhụ nnyefe nke ikpo okwu a na-enweghị mgbasa ozi, ọ bụ ezie na nke a bụ naanị maka ndị butere ọrụ ahụ.
Ndị ọrụ nwekwara ike irite uru site na ịnweta ihe odide, skins, ugbo ala, yana ọtụtụ mmụba maka egwuregwu vidio dị iche iche. Site na ijikọ akaụntụ Amazon ha, ha nwere ike ịnweta ụgwọ ọrụ na Twitch.
Nke a bụ ọrụ ndị ahịa adịchaghị Amazon nwere ike iji. rite uru na ntinye aka 15% na ndenye aha gi nile, Na mgbakwunye, ha nwere ike ịhazi otú ha ga-esi ziga ha n’afọ niile. Ọbụghị naanị nke ahụ, site na ịmepụta profaịlụ ụmụ gị, ịnwere ike ịnata ndụmọdụ ahaziri kwa ọnwa.
Ibu ụzọ nweta
Iji mechaa, nke a bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma gosipụtara uru nke ịbụ onye otu adịchaghị Amazon. Na mkpa ohere, ndị niile so na Prime nwere ike ịnweta Amazon Flash Deals, Nkeji 30 tupu ha enweta ndị ahịa nkịtị. Nke a pụtara na ha nwere ike ịchọta naanị ngwaahịa ha na-achọ na ọnụahịa kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Gịnị bụ Amazon Premium?